Anavar ndeimwe yepamusoro steroid yekuchera inoshandiswa nevarume nevakadzi | AASraw
/Blog/Oxandrolone/Anavar ndeimwe yepamusoro steroid yekucheka inoshandiswa nevarume nevakadzi
Posted on 12 / 14 / 2017 by Dr. Patrick Young akanyora Oxandrolone.
1.Anavar? 2.Effects yaAnavar
3.Pasitive Effects for Men 4.Magariro Evanhukadzi
5.Anavar Zvinyorwa uye Mashandisiro 6.Anavar Dosages uye Administration
7.Zvibatsiro zveAnavar 8.Anavar Side Effects
9.Wokutenga Anavana chaiye pfumbi yakakanyiwa paIndaneti?
|.Oxandrolone / Anavar zvinhu Characters:
Anavar inomiririra mumwe wevakakurumbira oral anabolic steroids nguva dzose, uye izvi zvinonyanya kukosha nokuda kwezvakanaka. Uyu ndeumwe wevashoma anabolic steroids iyo inogona kushandiswa yakachengeteka nevarume nevakadzi, uye ihwowo humwe humwe hunodikanwa hunoita ushamwari. Zvisinei, mune dzimwe nzvimbo Oxandrolone inonyanya kukoshesa nekuda kwehupenyu hwayo, asi izvi zvinowanzoitika nekuda kwezvisingatarisirwi. Vakawanda vanoda kutora zvose anabolic steroids rinofanira kupa chimiro chemigumisiro chaiyo pane imwe nhamba ye simba, asi chokwadi chinotitaurira shanduko dzakasiyana-siyana zvinotakura zvigaro zvakasiyana uye zvinangwa. Anavar haana mubvunzo chinhu chinobatsira zvikuru anabolic steroid, asi kuti tinyatsonzwisisa maropafadzo ayo tinofanira kuzvinzwisisa.
Kuchengeta-Off-Season: Sezvo Oxandrolone hormone isingabvumi, chero humwe uremu hunowanikwa nokuda kwekushandiswa huchava hunyoro hutsika hutsika. Kuchengetwa kwemvura hakugoneki nokuda kwekushandiswa kwei steroid. Zvisinei, kuwanikwa kukuru kunowanzobatanidzwa ne steroid bulking miviri hazvifanirwe kutarisirwa ne steroid iyi, zvinongoratidzika kuti hazvidiwi. Munhu wacho anofanira kunge akakwanisa kuwana mamwe maitiro akasimba akaoma uye mhinduro zhinji Anavar zvinowanikwa zviri nyore kubatisisa. Asi hazvizoiti kuti zviwanike zvakafanana nemaziviro anozivikanwa evanhu vakawanda Anadrol, Dianabol, Nandrolone or Testosterone. Vamwe vanogona kuwana pasinei nekuwana zvakakwana izvo zvavanoda.
Apo Anavar haasi iye wakanakisisa-nguva bulking steroid nokuda kwevanhu, kana zvasvika kune kushandiswa kwevakadzi tinofanira kuita chimwe chinhu. Vakadzi vanonyanya kufunga nezvaAnavar kupfuura varume, uye inogona kuva inyanzvi yakawanda-isina-season agent. Uyezve, vakadzi vazhinji havasi kutsvaga zviwanikwa muhukuru chero pedo nevanhurume; kazhinji kuwedzera zvishoma mumusimba kungashandura.
Pasinei nehupombwe, vose vanoshandisa Oxandrolone nokuda kwekunge-nguva yakawanda yekuwana zvikamu vachakoshesa mararamiro ayo ekugadzirisa mafungiro. Avo vanowedzera pamwe neOxandrolone hormone vachawana kuti vawane mafuta mashoma emuviri mashoma kupfuura ivo vangave vasina kudaro. Nokuda kwehuwandu hwakawanda hwe testosterone, vanhu vachawanawo dzimwe steroid inoshandiswa kuva yakanyanya. Inogona kunge isingabvi nemuzhinji, asi bito rekupedzisira rinobatsira.
Fat Loss: Pasina mubvunzo, murume kana mukadzi mumwe wezvakanakisisa nguva yekuwedzera neAnavar achava panguva yekucheka. Izvi zvichavawo chinangwa chinowanzoshandiswa sekushandiswa sehuwandu huzhinji hunoshandisa vanabolic steroid inopinda mumakwikwi emakwikwi ari kutora kunze kwechikwata chekugadzira chikwata nenzira yepamutemo. Pamusana pemafungiro ayo ane vanabolic ane simba, Anavar ndechimwe chezvinhu zvakanakisisa zve-steroid pasi pano pakuchengetedza miviri yakaonda panguva yekudya. Kuti tikwanise kurasikirwa nemafuta emuviri, tinofanira kupisa makoriri akawanda kupfuura zvatinodya. Chinobudirira chekudya kwemazuva ano chiri kurasikirwa nemafuta aidiwa apo uchichengetedza mishonga yakaonda kwazvo sezvinobvira; zvisinei, kurasikirwa kwematema kuchaitika. Hazvina mhosva kuti kuronga kwako kwakarongeka zvakadini,, kurasikirwa kwematumbo kuchaitika kana ine simba ine anabolic agent isipo. Anavar ndiye mutaridzi waunoda nekuda kwezvakataurwa pamusoro apa pamusoro pemigumisiro yayo.
Avo vanowedzera pamwe naAnavar munguva yekucheka chikamu vachatsvawo mafuta pamutengo wakanyanya. Pasinei nokuti yakasimba sei kunyatsonyoresa kana kuti kwete, chiyero chemagetsi chicharamba chichiwedzerwa zvikuru. Rimwechete rakatenderera, munhu wacho achaonawo kuti anowona akaoma uye anotsanangurwa zvakare. Izvi zvinowanzofambidzana nekuvandudzwa kwevascularity, uye kutarisa kwakanyanya.
Anavar anorumbidzwa zvikuru nevatambi vakawanda nokuda kwezvikonzero zvishoma. Iyi steroid ichawedzera simba; kuwedzera kwese hakuzove kwakakosha steroids se Dianabol uye hakuna nzvimbo pedyo nenheyo yeHalotestin, asi ichave yakakurumbira. Simba ndechimwe chezvinhu zvinokosha zvekutamba mitambo sezvo inoshandura mukukurumidza nesimba. Vakatambi vanokoshesa Anavar nekuda kwekuti hazvizogadziri chivako chikuru muhukuru. Mune zvimwe zviitiko, kuwedzerwa huwandu kunogona kuva chipingamupinyi zvichienderana nemutambo, uye mune dzimwe nguva, zvinounza kutarisa maziso ayo hapana mutambi anoda kwavari. Apo patinowedzera kufunga kuti steroid iyi haigoni kutungamirira mukuchengetedza mvura, mutoro unobvira kune vatambi vakawanda, Anavar anozorora seimwe yezvakanakisa zvemitambo.
Chinonyanya kukosha: Pasinei nechinangwa chekushandisa, vose avo vanowedzera pamwe naOxandrolone vachawana mukana wavo wekudzoka unowedzera, uyewo musimba wavo kutsungirira. Munhu wacho haazochemi nokukurumidza, uye achakwanisa kusundira kwenguva yakareba. Izvi hazvirevi kuti tinofanira kuwedzerwa nguva yezvikoro zvedu zvekudzidzisa, izvo zvingave kana zvisingave zviri izvo zvichienderana nemamiriro ezvinhu. Zvisinei, tichaita shanduro iri nani pakudzidzisa, tichazoshandisa zviri nani nguva yedu mumunda uye zvose mubasa rose rakanaka richaitwa.
3.Pasitive Effects for Men
1. Kuzivikanwa kwechigadzirwa kunogadziriswa nemasimba ayo makuru. Kushandiswa kweAnavar kuronga kunounza zvikwereti zvakawanda kune mumwe mutambi. Dzimba dzayo huru ndeyotevera:
Iko anbolic inokonzerwa nehukuru hunogona. Inokwanisa kuwedzera huwandu hwe testosterone kusvika ku 400%.
2. Androgenic kuvandudzwa. Pamusana pekubata kwechigadzirwa, munhu anogona kuwana 25% ye testosterone.
3. Kusavapo zvachose kweweserogen. Pachava pasina esrogen nyaya.
4. Kuvandudzwa kwekuoma kwemasumbu. Uturu hwemisumbu huchawedzera kune vazhinji nguva.
5. Kuwana zvakakwana zvekushanda. Vatambi vachakwanisa kunakidzwa nemigumisiro yakanaka.
6. Kuwedzerwa kukuru kwekuvapo kwekukura kwehomoni. Ichi chikamu chichavandudza zvese zvinokwanisa zvevatambi.
7. Inonyangarika uye inokurumidza kusvibiswa kwemaostostores. Nhamba yemagetsi inowedzera yakawanda.
8. A usability of both genders. Vanomhanya nevarume nevakadzi vanogona kunge vakashandisa zvakakwana chigadzirwa ichi.
9. Nguva yenguva refu yekuita. Anavar anopa nguva yakareba yenguva, inosvika maawa 12.
Sezvave zvataurwa kare, Oxandrolone inogona kushandiswa nevarume vaviri. Nokudaro, Anavar nokuda kwevakadzi vane tsananguro yakajeka zvakare.
Zviri pachena kuti varume nevakadzi vane maitiro akasiyana-siyana. Saizvozvowo, simba rekugadzirira rakasiyana richava nemigumisiro yakasiyana-siyana. Nokudaro, kukura kwemisumbu kuchave kunobatsira zvikuru kuvadzidzi vechikadzi. Vachawana uremu hwehutundu nekukurumidza uye nyore.
Imwe nzira inobatsira ndeyokuchengetedza basa remuviri wakaonda. Kunyange zvazvo kuwedzera kwekoriori kungave kwakakwana, Oxandrolone inobatsira kuwedzera kwemaitiro emagetsi.
5.Anavar Zvinyorwa uye Mashandisiro
Kunyange zvazvo Anavar akawana mukurumbira sekuti 'anocheka' kana kuti 'kudzura steroid'munguva yose yakapfuura, simba rayo haritauri pane izvi chete. Kunyange zvazvo inogona kuita nekubatsira zvakanyanya munzvimbo yekuwana kurasikirwa kwemafuta uye tsanangudzo yemuviri, iyo inyanzvi yakawandisa yekuwana kuwanda, simba, uye kubvongodza. Kuva iyo iyo 3 - 6 nguva iyo anabolic simba reTesttosterone, Anavar maitiro anogona zvechokwadi kunge ari kuvhara maitiro asingatauri.
Zvisinei, nokuti Anavar anokonzera kushungurudzika uye tsvina munzvimbo yehuvha basa, haigoni kushandiswa kwenguva yakafanana yeiyo sezvo iyo miviri inokonzerwa nemakemikari inogona. Nokudaro, inowanzobatanidzwa pakutanga kwepi zvayo yekutsvaga kwekutanga 6 - 8 masvondo asati abviswa. Anavar maitiro anokwanisa kuwedzerwa kusvika kumavhiki mashoma e10 pamutengo unonzwisisika, zvisinei, zvichienderana nehuwandu hwechiropa chekutyisa kune mamwe mavara emuromo. Pamusoro pezvinangwa zvekudhira, Anavar maitiro anowanzoshanda nemakemikari akafanana anoshandiswa kubhururuka, zvakadai sekureba kwenguva refu Testosterone (kureva Enanthate) uye zvichida ikemiti yakadai Deca-Durabolin (Nandrolone Decanoate).
Nekushandiswa kwayo mukurasikirwa kukuru nekucheka, maAnavar maitiro anowanzopfupika uye anoshandiswa nemishonga inoshandiswa pakuzadzisa zvinangwa zvakafanana. Izvi zvinogona kuva anabolic steroid akadai Testosterone Propionate, Trenbolone Acetate, Masteron (Drostanolone Propionate), nezvimwewo. Makemikari aya anowanzobata zvakafanana neAnavar uye anokurudzira zvikuru zvishoma kusachengetwa kwemvura kana kubhururuka izvo zvisingadi kudiwa munguva yekucheka uye kushaya mazai emafuta apo zvakakosha kuti muiti wehupenyu aone kushandurwa kwechirevo chemuviri .
6.Anavar Dosages uye Administration
Standard Anavar dosage nokuti kurapa kurapa kunowanzowira mu 5-10mg zuva nezuva ne 20mg pazuva zuva rega rega inonyanya kukosha. Kushandisa kwakadaro kunowanzopedza mavhiki e2-4 nechinguva chiduku mushure mekushandiswa usati waita yeiyo 2-4 vhiki yevhiki. Kushandisa kwakadaro kuchaenderera mberi chero bedzi ichionekwa sechidikanwa.
Nokuda kwevarume vanomhanya vari kutambira mutambo, 20-30mg pazuva reta dosing ichapa mutambo kukurudzira, asi vazhinji vachawana 40-50mg zuva kuti ive yakanyanyisa. 80mg zuva nezuva hazviwanzozivi, asi izvi zvichawedzera ngozi yemigumisiro. Maitiro ehurume anonzi Anavar maitiro anozopera mavhiki e6-8.
Nokuda kwechikadzi kubatsira mutambi, zvisinei nechinangwa chekushandiswa, 5-10mg pazuva ndeyemuwandu wakakwana. Vakadzi vashomanana vachadikanwa kupfuura 10mg pazuva. Kana zvakawanda zvichidiwa uye 10mg pazuva rakanyatsorambidzwa, 15mg zuva rimwe nerimwe vanogona kuedza kuti inotevera iende. Kunyange zvakadaro, kuwedzera kwose mu dosing kuchawedzera mungozi yehupenyu huripo. Maitiro e20mg pazuva achakanyanya kuwedzera njodzi nemitambo iri pamusoro peizvi zvose asi kuvimbisa zvimwe zvezinga re virilization. Mukadzi weAnavar mhemberero dzinozopera mavhiki e6-8.
Iro huwandu hwemishonga yezvokurapa hunodanwa neAnavar dhigiri muhuwandu hwe2.5 - 20mg pazuva, iyo yakanga yakanyanya kuvimba nehutano hwechirwere, chirwere, kana chirwere chinonzi Anavar chakanga chaitirwa. Muchirapa, Anavar ave achishandiswa semuenzaniso kune varwere veAIDS mukati mehuwandu hwe20 - 80mg pazuva kuti varwise uye / kana kuti vadzose kushanduka kwemisumbu. Izvo zvakave zvichiratidzwawo nekupisa vanhu vanofa. Ichi chiratidzo chokuratidza kwezera rega rega rega iro raizove rakabudirira pakukura kwemisimba uye kutambira. Sezvo Anavar ari mishonga ine ruzivo rwakakura nemazera akasiyana evarwere, zvinozoitika zveAnavar hazvisizvo zvinoenderana nezera.
Oxandrolone mapiritsi Balkan pharma Kunyange zvazvo Anavar ainge akanganisa kuti ave 'steroid munyoro' munzvimbo yevanabolic simba, zvidzidzo zvakaratidza zvisina kudaro, uye sezvakambotaurwa kare ikozvino, iyo inonzi 3 - 6 nguva iyo anabolic simba re Testosterone . Nokudaro, mumitambo yezvemitambo uye yekugadzira muviri, Anavar mizipa yevatangisi vanotanga kutanga nekugara mu 25 - 50mg zuva rega rega uye inofanira kupa mitsara yakawanda kana kuvharidza kana kuchera mafuta. Vashandisi vepamberi vanowanzotaurirana pakati pe50 - 80mg pazuva, uye kazhinji hazvidi kudiwa kudarika huwandu huno nekuda kwemigumisiro inoshamisa iyo iyo Anavar muyero inogona kupa. Hazviwanzoiti, zvakadaro, ruzivo rwakakura rweAnavar dheji runotanga mukati me80 - 100mg pazuva.
Kuva iyo Anavar iine anabolic steroid yakakura yemutambo wechikadzi uye muumbi wemuviri anoda kuti kuderedza uye kubvisa uyerogenic virilization migumisiro sezvinoratidzwa mune zvidzidzo, vakadzi vakawanda vachishandisa chirwere cheAnavar mukati me5 - 10mg pazuva. Vakadziri vese vashandisi vese vanogona kuda kusvitsa envelope iyo inokwira kusvika ku 20mg pazuva, asi zvinokurudzirwa kuti chero yese uye vakadzi vose vanoshandisa Anavar kumusana kwemuviri kana kuti mitambo inopedzisira vasisina kupfuura 4 - Vhiki dze6 panguva imwe.
Panewo chimwe chinhu chingafanira kutaurwa pamusoro pekubatanidza Oxandrolone dosage ne caffeine. Chimwe chidzidzo chakaratidza kuti kungoita 300mg ye caffeine inobatanidzwa pamwe chete naAnavar yakawedzera nyaya ye 'plasma yeropa mazinga eAnavar ne15 - 20x akaenzaniswa nemazinga ekutanga.
Sezvinyoro chaizvo anabolic steroid Anavar haina kukodzera bulking cycles kana kuwana zvikamu; iwe haugoni kubudisa huwandu hwakawanda hwemutsipa hutema kuburikidza nekushandiswa kwahwo apo uchitaura nezvekushanda kwekuvandudza zvinangwa; zvisinei, izvo zvinogadzirwa zvichave zvakasimba musimba mhuka. Zvikomborero zvikuru zvinosanganiswa neyi steroid chaiyo inomira mukati mekuchengetedza kwemisumbu uye basa remagetsi. Izvi zvinongoreva kuti Oxandrolone inokwanisa kusingobatsira chete mukuderedza muviri-mafuta asi kuchengetedza mishonga yemasikari panguva yekudya kwekoriori isina kugadziriswa; uyezve, kunyanya mishonga yemasumbu tine zvakanyanya basa redu rekugadzirisa zvigadzirwa zvichave zvichiwedzera kuwedzera kwe-iyo muviri wemafuta inoshandiswa kuitira simba. Nokuti Oxandrolone yakakosha kuderedza mafuta uye kuchengetedza kwemisungo inowanzoshandiswa nevatambi vemasikirwo panguva yavo yekugadzirisa makwikwi, pamwe chete nejasi rinowanzoita gym iyo inongoda kutarisa uye yakasimba pamhenderekedzo.
Sezvakambobatwa, Anavar anorumbidzwa pamwe nekurumbidzwa pakati pevarimi vemiti, vatambi, uye vezvechiremba nokuda kwerutivi rwaro rusinganzwisisiki-effect-kubatsiri uye huwandu hwayo husina matanho akaipa kana tichienzanisa nemamwe akawanda anabolic steroids.
Estrogenic madhara haina zvachose naAnavar nemhaka yekuti iyo inobva kuDHT, iyo inonzi horroone androgenic inenge isisakwanisi kutendeukira kuEstrogen. Sezvo akadaro, Anavar ane chimiro ichi. Mune mamwe mazwi, migumisiro yakafanana yeEstrogen (yakadai sokuchengetedza mvura, kubvisa, mafuta ekuchengetedza / kuwana, uye kukura kwegynecomastia) hazvisati zvaonekwa. Mukuwedzera pakushaikwa kwese kweEstrogenic, Anavar haatombogoni kuita chero Progestogenic basa zvakare, nokudaro achiregeredza chero zvingava nemigumisiro yakaipa ikoko zvakare.
Kunyange zvazvo Anavar ari kufanana uye androgenic kupfuura Testosterone nedambudziko guru, migumisiro pano inogona kuitika zvikurukuru kune avo vanogona kuva nehanya ne androgenic madhara. Izvi zvinogona kusanganisira kuwedzera ganda remafuta, mazino, vhudzi kuwedzera kukura mumuviri uye mumuviri, uye nengozi dzinosanganisira kuvepa mhando yevarume (MPB) uye benign prostatic hyperplasia (BPH).
Pasinei nezvinowanzoitwa Oxandrolone "kuva munyoro pamagumo endocrine", kune uchapupu kune zvakasiyana zvachose apo tsvakurudzo dzakaratidza kuti anenge 40% kudzvinyirira kwekugadzirwa kwe Testosterone nekugadzira uye testicular mushure mekunge mazuva 5 chete anoshandiswa pa 15mg zuva nezuva majaya. Nokudaro, Oxandrolone haifaniri kutorwa zvishoma munzvimbo yekudzvinyirirwa uye kuvhiringidza hormonal function. Kana iyo inogona kukanganisa HPTA (Hypothalamic Pituitary Testicular Axis) mushure mezuva re 5 remazuva chete anoshandiswa pa 15mg pazuva, rinogona uye richaita kuti kusagadzikana kwakakwana kwemasvondo ekushandiswa kuwedzere 'muviri wekuvaka muviri'.
Mukuenzanisa nemamwe muromo anabolic steroids, zvidzidzo zvakaratidza kuti Oxandrolone inoratidzira huwandu hwehepatotoxicity uye kuoma kwechiropa chinoshanda chavose. Zvinofanira kutariswa kuti Anavar achiri kuratidza chiyero chehutsanana munharaunda iyi, saka zvichiri kuchenjera kuti usashandise Oxandrolone ye 8 - 10 yevhiki kwemaawa anokwana. Zvakakwana supplementation nemakemikari akanaka ekusimbiswa uye nguva dzose inokosha pakushandisa oral anabolic steroid, zvisinei kuti vane unyoro vangati ndevepi.
9.Wa Tenga Anavar Yechokwadi yaiiswa pombi online ?
Iwe unogona kuwana vazhinji maAnavar powder source online, asi zvakaoma kutenga Anava chaiyo raw online. Pane zvakawanda zvinotengesa kutengesa zvigadzirwa pamusika. saka kana iwe uchitenga Oxandrolone raw materials online, unofanira kusarudza realable source.
Proviron inonyanya anabolic steroid mukucheka maitiro	Modafinil - Top Smart Drug neNootropic Benefits